Xukuumadda Oo Ganaaxday Shirkadda Red Sea iyo Shaybaadhka Shiidaalka Berbera | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Xukuumadda Oo Ganaaxday Shirkadda Red Sea iyo Shaybaadhka Shiidaalka Berbera
Published on May 10, 2018 by sdwo · No Comments
Hargeysa (SDWO): Xukumadda Somaliland ayaa ganaax lacageed ku ridday shirkadda shidaalka soo dejisa ee Red-sea iyo shirkadda gacanta ku haysa shaybaadhka shidaalka, kadib markii Haamaha kaydka shidaalka ee Berbera lagu shubay shidaal wasakhaysan oo qasaare soo gaadhsiiyay gaadiidlayda kala duwan ee dalka.
Waxaanu intaa ku daray in ay xukun ganaax lacageed ah ku rideen shirkadda shidaalka keentay iyo shaybaadhka shidaalka labada ba. Wasiirka oo ka hadlyay tallaabada ay qaadeen ayaa yidhi “Kadib markaanu badhitaan siyaado ah aanu samaynay.
Waxaanu xogtii ku ogaanay in Shirkada Red Sea iyo shaybaadhka Berbera ay leeyihiin Masuuliyadda sababtay, iyaga oo ogaa inuu yahay Shidaal wasakhaysan iyo shaybaadhka oo masuuliyaddii looga baahna aan qaban oo siiyey ogolaanshaha in shidaalka lagu shubo haamaha.”
Wasiir Saajin ayaa sheegay in labada shirkadood midkiiba lagu ganaaxay lacag dhan $355,500, taas oo wadarta ganaxooda ka dhigaysa $711,000.
Waxaanu ydihi “Shirkadda Red Sea iyo Shaybaadhka Berbera labadaba waxaa la ganaaxay lacag ganaax ah oo is leeg oo midkiiba saddex boqol, shan iyo konton kun iyo shan boqol oo doolar ah, waxaan farayaa in arrinta ay si degdeg ah u fuliyaan, kuna shubaan lacagtaa Wasaaradda Maaliyada, Wasaaradda Maaliyaduna waa in ay arrintany daba gashaa.”
Waxaanu wasiirku digiin kama dambays ah u diray shirkadaha wax soo jediya nooc kasta oo ay yihiin.
Waxaanu yidhi “Dadweynaha wax soo geliya waddanka ha noqoto dawo ama cunto waxaan kula talinayaa in ay ka digtoonadaan iyaga oo u tudhaya dadka si deg deg ahna aan uga tabaabushaysanayno oo ganaaxa kuwan ku dhacay uu ku dhici doono ciddii kale ee ku dhaqaaqda.
Meelaha waxa laga soo dejiyana waxaan si degdeg ah u dhigaynaa shaybaadhkii lagu baadhayey”.